ရီယိုတစ်ယောက် လက်ဝှေ့သမားလိုင်စင်ရသွားတယ်ဆိုကြပါစို့ – Miracle Times
မန်ယူကစားသမား ရီယိုဖာဒီနန်ဟာ ဘောလုံးသမားဘဝကအနားယူပြီးနှစ်အနဲငယ်အကြာမှာ လက်ဝှေ့သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ Register တင်ပါတယ်တဲ့။ အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့် Registration မအောင်ခဲ့တာကြောင့် သူကလက်ဝှေ့သမားတစ်ယောက်တော့ဖြစ်မလာနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အခုတော့ BT Sports မှာ ဝေဖန်သူလုပ်နေပါတယ်။
ရီယိုတစ်ယောက် လက်ဝှေ့သမားလိုင်စင်ရသွားတယ်ဆိုကြပါစို့ .. ဘာတွေများဖြစ်သွားနိုင်မလဲ။….
ကျွန်တော်ကတော့ ဘောလုံးသမားဘဝကအနားယူပြီးမှ သူကြိုက်တာသူလျှောက်လုပ်တာဆိုတော့ ဘာမှထူးခြားပြီးဖြစ်လာမယ်တော့မထင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ခုလို BT Sports မှာ ဘောလုံးအကြောင်းဝေဖန်နေတဲ့ ရီယို ကိုတော့တွေ့ရမှာမဟုတ်သလို မြန်မာပြည်ကို legend တစ်ယောက်အဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်ရပ်လည်း မဖြစ်သွားလောက်ပါဘူး။ ရီယိုစီးတဲ့ဆိုက်ကားဆရာကြီး ဝင်ငွေလျော့သွားမှာဖြစ်ပြီး ပွဲစီစဥ်တဲ့ Company လည်းအလုပ်မရဘူးပေါ့။
လျှောက်ဝေဘင် .. ဆောရီး ဝေဖန်နေတဲ့ ရီယိုမရှိတော့ဘူးဆိုရင် ရိုနယ်ဒို ပြန်လာတဲ့ညက ဖုန်ထတဲ့ ပို့စ်တွေလည်းရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ တစ်ပွဲနှစ်ပွဲကစားပြီး အခြေမလှတာမျိုးဖြစ်နိုင်သလို ဆေးရုံရောက်သွားတာမျိုးလဲရှိချင်ရှိပါလိမ့်မယ်။တွေးကြည့်တာပါ .. သူသာလက်ဝှေ့လိုင်စင်ရသွားခဲ့ရင်ဆိုပြီး။
အခုအကြောင်းလေးက အထူးဆောင်းပါးတွေ မလာခင်မှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ပြောကြတဲ့သဘောပါပဲ။ မကြာခင်ရက်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ လာခဲ့ပါမယ့်။ ဆုံကြတာပေါ့ဗျား ….
Pyae Sone Phyo's
EPL News, Football, Manchester United
နောက်ဆုံးရ အာဆင်နယ်သတင်းများ (10Oct – 10am)